Falanqaynta aasaasiga ah ee Ganacsiga ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Waxaan lacag ku kasbanaa falanqaynta aasaasiga ah
Falanqaynta aasaasiga ah waa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah . Waxaa la rumeysan yahay in tani ay u baahan tahay khibrad badan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bilowdo, qodobkaan ayaa kaa caawin doona inaad hal talaabo ka horreyso kuwa kale.
Mabda 'aasaasi ah
Ujeedada falanqeyn kasta oo suuqa ah waa in la saadaaliyo dhaqdhaqaaqa qiimaha. Aragtida Dow ee ka dambeysa falanqaynta farsamada waxay sheegaysaa in "taariikhdu iskeed isu soo noqnoqoto" iyo "qiimaha ayaa wax walba ku jira."
Waad eegi kartaa tilmaamayaasha muddo dheer, laakiin isbeddelka dheelitirka ee iibsadayaasha / iibiyeyaasha waxaa lagu go'aamiyaa oo keliya arrimaha dhaqaalaha adduunka ee sida tooska ah u saameeya saamiyada iyo suuqyada sarrifka lacagaha qalaad. Falanqeeyayaasha aasaasiga ah waxay u hoggaansamaan mala awaalka wax ku oolka ah ee suuqa waxayna u maleynayaan in suuqa uu si joogto ah u raadinayo qiimo macquul ah - ka weecashada loo isticmaali karo in lagu baaro xulashooyinka ikhtiyaariga ah calaamadaha forex .
Marka qiimaha hadda uu ka sarreeyo "caddaaladda" - hantida aad loo badiyo, qiimaha waa inuu hoos u dhacaa - waxaan raadineynaa goobo laga soo galo PUT-option. Markuu hooseeyo, fur kaliya CALL-xulashada.
Lacagta sameeyayaasha leh tirooyinkooda mala awaalka ah waxay si joogto ah u abuuraan isku dheelitirnaan la'aan suuq ah, taasoo ku qasbeysa ciyaartoy badan oo yaryar ("market plankton") inay u dhaqaaqaan dhanka saxda ah.
Waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto shuruudaha. Sidaas:
Falanqaynta aasaasiga ah waa calaamadaha binary auto ama istiraatiijiyad ganacsi oo ku saleysan dhaqaalaha, geopolitical, iyo arrimo dabiici ah, tirakoobka, iyo falalka bangiyada Dhexe iyo xukumayaasha dowladda. Dhacdooyinka kale iyo qaababka saameynaya dhammaan suuqyada maaliyadeed: saamiyada, badeecadaha, lacagaha, shirkadaha, iyo qeybaha dhaqaalaha .
Wax badan ka baro sida ay u shaqeyso
Dhammaan macluumaadka maahan inay xoog ku yeeshaan "cadaadis" suuqa. Caadi ahaan, arrimaha la saadaaliyay horay ayaa xisaabta loogu darsaday qiimaha, ma sababi karaan isbeddello mala-awaal ah ama gadaal uma noqon karaan isbeddellada.
Falanqaynta aasaasiga ah ee hantida waxay ka bilaabantaa go'aaminta liiska waxyaabaha inta badan saameeya. Qayb kasta oo ka mid ah qaybaha soo socda ayaa tixgelin dheeraad ah lagu siin doonaa qodobbada u gaarka ah, laakiin hadda waxaan diiradda saari doonaa teesarada guud.
Fursadaha aasaasiga ah :
Habka isbarbardhiga. Saamaynta isugeynta tirakoobka ee hogaaminaya wadamada EU ee ku saabsan sarifka lacagta euro-da marka loo eego dollarka.
Kala duwanaansho wax soo saar iyo goyn. Tusaale ahaan waa tirakoob adag, warbixinno tirakoob oo shirkadaha, saamaynta suuqa saamiyada ee dhaqdhaqaaqa lacagaha badeecadaha.
Habka iswaafajinta. Tusaalaha ayaa ah isku xirnaanta ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ah labada lamaane ee AUD / USD qiimaha dahabka ama doolarka Kanada ilaa saliida.
Is kooxaysi iyo soo koobid. Tusaale: indices adag ee lacagaha dalalka soo koraya ee saameeya isbeddelka guud ee gobolka.
Xilliyeed. Tusaale: xaaladaha cimilada ee saamaynaya beeraha, iibsiga oo kordhay maalmaha ciidaha, iibsashada lacagta qalaad ee lacag bixinta inta lagu jiro muddada warbixinta maaliyadeed.
Intaa waxaa dheer, waxaan had iyo jeer tixgelineynaa:
Saamaynta muddada-dheer ee dhaqaalaha adduunka ama qaranka muddo u dhexeysa 3-6 bilood illaa dhowr sano;
Saamaynta muddada-gaaban ee suuqa dhawr saacadood gudahood (daqiiqado) gudahood.
«Xanta» iyo xoog majeure
Mar labaad, waxaad u baahan tahay inaad qeexdo ereyga. "Xanta" waxaa loo tixgeliyaa inay tahay macluumaad aan la xaqiijin (oo ay ku jiraan kuwa kor ku xusan), iyo sidoo kale buunbuunin ka hor inta aan la sii deyn tirakoobyada ama dhacdo kasta oo kale oo keenta falcelin sicir-celin qiimaheeda ah oo istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u joojiyo shaqada.
Si joogto ah warbaahinta iyo internetka, "xanta" ayaa si gaar ah loogu tuuraa suuqa. Si tan loo soo celiyo, looga faalloodo, loo lafa-gurey, loo saadaaliyo, ka dibna ciyaartoydii waaweyni ay "kareemkii uga gaabiyeen" argagaxa soo socda.
Si kastaba ha noqotee, sheekada caadiga ah "ku iibso xanta, ku iibso wararka" qormada hadda ma shaqeyneyso. Macluumaadka lagu kalsoonaan karo ayaa si dhakhso leh loogu tixgeliyaa calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah (kala-baxa suuqa), iyo mala-awaalayaashu waxay kaliya lacag ku heli karaan daandaansi.
Halka ciyaartooyda yaryar ay lacag ku waayaan "wararka xanta ah"; ciyaartooy xirfadlayaal ah ayaa halistooda ku xayiraya hanti kale si ay u magdhabaan qasaaraha ka dhalan kara markay "xogta dhabta ah" soo muuqato.
Waa inaan sidoo kale muujino duruufaha xoogga leh ee aan la saadaalin karin :
Isku dhacyada militariga: dal gardarro badanaa wuxuu ku guuleystaa dhaqaale ahaan muddada gaaban.
Musiibooyinka dabiiciga ah: waxay si taban u saameeyaan sarrifka lacagta waddanka, sicirka alaabta ceyriinka iyo tamarta ee waddanka ama gobolka ay dhibaatadu saameysey.
Isbedelka koorsada siyaasadeed: doorashooyinka, dhibaatooyinka, afgambiga.
Muhiim: xaaladaha xoog ku muquuninta, waxaa muhiim ah in la hubiyo in barxadda ganacsiga binary farsamo ahaan si sax ah u fuliso amarrada (bilaa dacar, luminta xigashooyinka, liidashada daciifka ah), waana suurtagal in si dhakhso leh loo xiro macaamilka .
Halka laga helo xogta aasaasiga ah
Aasaasiga ah (ma wada aha !!) wararka ilaha iyo tirakoobka:
Tirakoobka rasmiga ah iyo xogta;
Macluumaadka dawladda iyo hay'adaha maaliyadeed, bangiyada qaranka, iyo ururada warshadaha;
Daabacadaha macluumaadka iyo wakaaladaha gorfaynta, daabacaadaha waaweyn ee dhaqaalaha;
Bayaanka iyo faallooyinka saraakiisha, madaxda hay'adaha maaliyadeed, falanqeeyayaasha, siyaasiyiinta iyo ganacsatada;
Warbixinnada iyo saadaasha horumarinta qaybaha dhaqaalaha qaarkood, warsaxaafadeedyada;
Dib u eegista khabiirka ah, warbixinta maaliyadeed iyo shirkadaha, falanqaynta shirkadaha hogaaminaya.
Muhiim: ha iloobin heerka kalsoonida iyo ku xirnaanta xogta. Tani waxay ka dhigan tahay in falanqeyn kasta ay tahay mid shaqsiyeed (xitaa rasmi ah!), Daabacaaddeeduna waxay daba geli kartaa yoolal kale, oo ay ku jiraan baqdin gelin iyo xog-ogaalnimo .
Waa inaad hubisaa halka ay ka timaaddo, shaandhayso macluumaadka, calaamadaha binariga ah ee bilaashka ah, oo aad ula dhaqanto wixii gabagabo ah shaki caafimaad qaba.
Waa in loo tixgeliyaa inay tahay mid rasmi ah (oo aan ahayn mid aad u tiro badan) tirakoobka waxaa ilaaliya oo "hubiya" dowladda, qaabdhismeedka lacageed iyo shirkadaha - kalsoonidoodu waxay ku xiran tahay tan.
Tusaale ahaan, inta badan tirakoobka rasmiga ah ee Shiinaha waa la faafreebay. Badanaa, uma dhigmo xaaladda dhabta ah ee dhaqaalaha waana la sameeyaa iyadoo kuxiran hadafyada siyaasadeed ee hadda jira.
Ganacsatada la shaqeysa hantida Aasiya waxaa lagula talinayaa inay qaataan istiraatiijiyad macluumaad oo ku saabsan ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo laga helo wakaaladaha madaxa bannaan sida HSBC, Boom, Guoco Group, Hong Kong Academy of Finance .
Foomka ugu habboon ee soo bandhigidda macluumaadka lagama maarmaanka u ah waa kalandarka dhaqaalaha, kaas oo laga heli karo inta badan barnaamijyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, waxaana sidoo kale lagu dari karaa inuu noqdo xog-haye ilaha kasta.
Falanqaynta farsamada waxay darsaan “waagii hore” suuqa, laakiin mustaqbalka had iyo jeer waxaa go’aamiya dhaqaalaha, mana aha tilmaamayaasha;
Markaad ka fekereyso sida calaamadaha u shaqeynayaan ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah, marwalba xusuusnow in macluumaadka aasaasiga ahi had iyo jeer yahay mid qaraabo ah. Waxay macno samaynaysaa oo keliya haddii waddanka (gobolka, shirkadda) hantida la soo xulay ay ku shaqeyso dhaqaalaha suuqa, ma jiro sharci adag oo lagu xakameynayo dhaqaalaha, xakameynta iyo ku takrifalka xogta;
Tilmaamayaasha isku midka ah, tirakoobka, dhacdooyinka xaaladaha kala duwan waxay ku hayaan "cadaadis" kala duwan suuqa, madmadowgan wuxuu adkeeyay falanqaynta aasaasiga ah;
Fahamka xiriirka ka dhexeeya suuqa iyo awoodda qiimeynta arrimo badan ayaa ku yimaada oo keliya khibrad. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyada oo la adeegsanayo istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh, ma iska indhatiri kartid saameynta aasaaska ee suuqa. Haddii kale, suuqa, markiisa, wuu ku indha tirayaa.